ညိုမည်းနေတဲ့ နှုတ်ခမ်းသားတွေ ပန်းနုသွေးခြယ်လာစေဖို့ ဒီနည်းလေးတွေ သုံးကြည့်ပါ။ - For her Myanmar
ဟိတ်… နှုတ်ခမ်းနီ အရောင်ကတစ်မျိုး၊ ကိုယ်ဆိုးလိုက်ရင် ထွက်လာတဲ့ အရောင်က တစ်မျိုး ဖြစ်နေပြီလား?
မိတ်ကပ်ရေစီးကြောင်းကလည်း သဘာဝမှ သဘာဝဆိုတော့ ခါတိုင်းလို နှုတ်ခမ်းနီ အရောင်ရင့်တွေဘက် သိပ်လှည့်လို့မရဘဲ အရောင်နုနုလေးတွေကိုမှ လုံးဝဖျော့ဖျော့လေးတွေက မဖြစ်မနေ ဆိုးရမယ့် အနေအထားတစ်ခုကို ရောက်လာပြီလေ… အိမ်း.. အဲဒီမှာ ပြဿနာတက်တာက နှုတ်ခမ်းသားမည်းတဲ့ ယောင်းယောင်းတွေပါပဲ။ နှုတ်ခမ်းနီအရောင်လေးက ဖျော့ဖျော့လေး ဒါပေမဲ့ ကိုယ့်နှုတ်ခမ်းပေါ် တင်လိုက်တော့မှ ကိုယ့်နှုတ်ခမ်းအရောင်နဲ့ ရောပြီး မလှတော့တာမျိုး ဖြစ်ဖူးကြတယ်ဟုတ်? ဆိုတော့ကား ဒီပြဿနာကို ဖြေရှင်းနိုင်မယ့် နည်းလမ်းကတော့ နှုတ်ခမ်းလေးတွေကို ပန်းရောင်ပြန်သမ်းလာအောင် လုပ်တာပါပဲ… အိမ်တွင်းနည်းလေးတွေနဲ့ ဘယ်လို ဖြေရှင်းမလဲ တူတူကြည့်ကြရအောင်…
(၁) ရှားစောင်းလက်ပပ်နဲ့ သံလွင်ဆီ
ရှားစောင်းလက်ပပ်ဆိုတာ အလှအပအတွက် မျက်လှည့်ပစ္စည်းလိုပါပဲ။ အသားအရေကို ရေဓာတ်ပြည့်ပြီးတင်းရင်းလှပစေတယ်၊ ဆံပင်ကိုလည်း အားဖြည့်ပေးတဲ့အပြင် အခုနှုတ်ခမ်းကိုပါ အရောင်ပြန်တင်ပေးတယ်ဆိုတော့ သူက ဂျိုကာပဲပေါ့…
ရှားစောင်းလက်ပပ်ကို အပြင်အခွံတွေ ခွာထုတ်လိုက်ပြီး အတွင်းသားတွေကို ခွက်အလွတ်ထဲ ထည့်ပါ။ ပြီးတာနဲ့ သံလွင်ဆီတစ်ဇွန်းကို အဲဒီခွက်ထဲထည့်ပြီး အားလုံးနှံ့အောင် မွှေပြီးသွားတာနဲ့ သုံးလို့ရပါပြီ။ (သတိရတိုင်းသာ ထုတ်ထုတ်လိမ်းပါလေ့) ဗီတာမင် E ကြွယ်ဝစွာ ပါဝင်နေတာမို့ နှုတ်ခမ်းသားကို စိုစိုပြည်ပြည် အိအိထွေးထွေးလေးနဲ့ ပန်းရောင်သန်းနေစေမှာပါနော်…
ပါလေရာ ပဲခူးဆားလေး ရှားစောင်းလက်ပပ်
Related Article >>> အရောင်ဆန်းဆန်းနှုတ်ခမ်းနီအရင့်များ
(၂) သကြားနဲ့ အုန်းဆီ
သကြားဆိုသည်မှာလည်း Waxလုပ်လည်းပါရ၊ scrub လုပ်လည်းပါရနဲ့ အမျိုးစုံ ကြိုးခုန်ပြီးကို ဝင်ပါနေတော့တာ။ ခုလည်းကြည့်… နှုတ်ခမ်းပေါ် တင်သုံးပြန်တော့လည်း ပန်းရောင်လေး သမ်းစေသတဲ့လေ…
သကြားညို လ္ဘက်ရည်ဇွန်းတစ်ဇွန်းကို ပျားရည်တစ်ဇွန်းထည့် နှစ်ခုကို ရောမွှေလိုက်ပါ။ ပြီးတာနဲ့ နှုတ်ခမ်းပေါ်ကို စက်ဝိုင်းပုံစံတင်ပြီး နှိပ်နယ်ပေးလိုက်ပါနော်။ ၅ မိနစ်လောက် ထားပြီးတာနဲ့ နှုတ်ခမ်းကို အဝတ်နဲ့သုတ်ပြီး ရေနွေးနွေးလေးနဲ့ ဖွဖွလေး ပြန်လိုက်ဖိပေးပါ။ တစ်ပတ် နှစ်ခါလောက် လုပ်ပေးရုံနဲ့ ဆဲလ်အသေတွေ ကွာကျပြီး ကျန်းမာရွှန်းစိုတဲ့ ပန်းနုရောင်နှုတ်ခမ်းလေးကို ပိုင်ဆိုင်စေမှာပါ။
(၃) သလဲသီးအရည်နဲ့ နှုတ်ခမ်းအဆီ
သလဲသီးစားရင် လက်မှာ အနီရောင်တွေ စွဲပြီးကျန်ခဲ့တယ်မလား? အဲဒီစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စရာကို အခုအားသာချက်အနေနဲ့သုံးမယ်လေ။
သလဲသီးအစေ့တွေကို ကြိတ်ချေပြီး ရလာတဲ့အရည်တချို့ကို ကိုယ်သုံးနေကျ lip blam ထဲ ထည့်ပြီး မွှေလိုက်ပါ။ အားလုံးနှံ့သွားပြီဆိုတာနဲ့ ခဏလောက်အခြောက်ခံပြီး သုံးလို့ရပါပြီနော်။ ဒီဟာကိုလည်း ကိုယ် lip blam လိမ်းသလိုပဲ ကြိုက်တဲ့အချိန်မှာ ကြိုက်သလို လိမ်းလို့ရပါတယ်။ သလဲသီးမှာ ပါဝင်တဲ့ punicalagins ဆိုတဲ့ဓာတ်ပစ္စည်းက ယောင်းတို့ နှုတ်ခမ်းညိုနေတာကို လျှော့ချပေးပြီး သဘာဝဆန်ဆန် ပန်းရောင်သန်းလာစေမှာပါ။
Related Article >>> ယုံကြည်မှုကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်တဲ့ အနီရောင်နှုတ်ခမ်းနီ2018/
(၄) နှင်းဆီပန်းပွင့်ဖတ်နဲ့ နွားနို့
ရှေးခေတ်တုန်းက အမျိုးသမီးတွေ နှုတ်ခမ်းနီနဲ့ ပါးနီကို နှင်းဆီပန်းကို အရည်ဖျော်၊ အခဲ (သို့) အနှစ်လုပ်ပြီး လိမ်းခြယ်ခဲ့ကြတယ်မလား။ ဒီမှာလည်း အဲဒီနည်းကိုပြန်သုံးပြီး နှုတ်ခမ်းကို ပေါင်းတင်ကြည့်ရအောင်…
နှင်းဆီပွင့်ဖတ် ၅ ဖတ်ကို နွားနို့ဖန်ခွက်ရဲ့ တစ်ဝက်လောက်နဲ့ရောပြီး တစ်ညလောက်စိမ်ထားလိုက်ပါ။ မနက်ကျရင်တော့ အဲဒီနှင်းဆီပွင့်ဖတ်တွေကို ဆယ်ပြီး ကြေညက်သွားအောင် ထောင်းပြီး နွားနို့ကို တစ်စက်ချင်းစီထည့်ပါ။ အနှစ်လေးဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့ နှုတ်ခမ်းပေါ်မှာ ၁၅ မိနစ်လောက်သုတ်လိမ်းထားပြီး ရေအေးအေးလေးနဲ့ ပြန်ဆေးချလိုက်ပါ။ တစ်ပတ်ကို ၂ ကြိမ်ကနေ ၃ ကြိမ်လောက်အထိ လုပ်ပေးရုံနဲ့ အနီရောင်သန်းတဲ့ နှုတ်ခမ်းလေးတစ်စုံ ရနိုင်ပါပြီလို့။
ကဲ ဒီပစ္စည်းတွေကတော့ လွယ်လွယ်နဲ့ ဘယ်နေရာမှာမဆို ရှာလို့ရတာမို့ လုပ်ရတာလည်း အရမ်းအပန်းမကြီးပါဘူးနော့်။ အခုပဲလုပ်ပြီး ချက်ချင်းတော့ မသိသာလာနိုင်ဘူးလို့ ဆိုပေမဲ့ တဖြည်းဖြည်းချင်းတော့ သိသိသာသာ ပြောင်းလဲလာမှာမို့ တစ်ခါနှစ်ခါလောက် လုပ်ပြီး လက်မလျှော့လိုက်ပါနဲ့လို့ မှာပါရစေ ယောင်းတို့ရေ… ကိုယ့်မျက်နှာကို နှစ်ရှည်လများ ပစ္စည်းအကောင်းတွေသုံးပြီး ချစ်လာရသလို နှုတ်ခမ်းကိုလည်း ချစ်ပေးလိုက်ပါ။ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ ပန်းနုရောင်နှုတ်ခမ်းလေးကို ရလာပါလိမ့်မယ်။
References: healthline, stylecraze
ဟိတျ… နှုတျခမျးနီ အရောငျကတဈမြိုး၊ ကိုယျဆိုးလိုကျရငျ ထှကျလာတဲ့ အရောငျက တဈမြိုး ဖွဈနပွေီလား?
မိတျကပျရစေီးကွောငျးကလညျး သဘာဝမှ သဘာဝဆိုတော့ ခါတိုငျးလို နှုတျခမျးနီ အရောငျရငျ့တှဘေကျ သိပျလှညျ့လို့မရဘဲ အရောငျနုနုလေးတှကေိုမှ လုံးဝဖြော့ဖြော့လေးတှကေ မဖွဈမနေ ဆိုးရမယျ့ အနအေထားတဈခုကို ရောကျလာပွီလေ… အိမျး.. အဲဒီမှာ ပွဿနာတကျတာက နှုတျခမျးသားမညျးတဲ့ ယောငျးယောငျးတှပေါပဲ။ နှုတျခမျးနီအရောငျလေးက ဖြော့ဖြော့လေး ဒါပမေဲ့ ကိုယျ့နှုတျခမျးပျေါ တငျလိုကျတော့မှ ကိုယျ့နှုတျခမျးအရောငျနဲ့ ရောပွီး မလှတော့တာမြိုး ဖွဈဖူးကွတယျဟုတျ? ဆိုတော့ကား ဒီပွဿနာကို ဖွရှေငျးနိုငျမယျ့ နညျးလမျးကတော့ နှုတျခမျးလေးတှကေို ပနျးရောငျပွနျသမျးလာအောငျ လုပျတာပါပဲ… အိမျတှငျးနညျးလေးတှနေဲ့ ဘယျလို ဖွရှေငျးမလဲ တူတူကွညျ့ကွရအောငျ…
(၁) ရှားစောငျးလကျပပျနဲ့ သံလှငျဆီ
ရှားစောငျးလကျပပျဆိုတာ အလှပအအတှကျ မကျြလှညျ့ပစ်စညျးလိုပါပဲ။ အသားအရကေို ရဓောတျပွညျ့ပွီးတငျးရငျးလှပစတေယျ၊ ဆံပငျကိုလညျး အားဖွညျ့ပေးတဲ့အပွငျ အခုနှုတျခမျးကိုပါ အရောငျပွနျတငျပေးတယျဆိုတော့ သူက ဂြိုကာပဲပေါ့…
ရှားစောငျးလကျပပျကို အပွငျအခှံတှေ ခှာထုတျလိုကျပွီး အတှငျးသားတှကေို ခှကျအလှတျထဲ ထညျ့ပါ။ ပွီးတာနဲ့ သံလှငျဆီတဈဇှနျးကို အဲဒီခှကျထဲထညျ့ပွီး အားလုံးနှံ့အောငျ မှပွေီးသှားတာနဲ့ သုံးလို့ရပါပွီ။ (သတိရတိုငျးသာ ထုတျထုတျလိမျးပါလေ့) ဗီတာမငျ E ကွှယျဝစှာ ပါဝငျနတောမို့ နှုတျခမျးသားကို စိုစိုပွညျပွညျ အိအိထှေးထှေးလေးနဲ့ ပနျးရောငျသနျးနစေမှောပါနျော…
ပါလရော ပဲခူးဆားလေး ရှားစောငျးလကျပပျ
Related Article >>> အရောငျဆနျးဆနျးနှုတျခမျးနီအရငျ့မြား
(၂) သကွားနဲ့ အုနျးဆီ
သကွားဆိုသညျမှာလညျး Waxလုပျလညျးပါရ၊ scrub လုပျလညျးပါရနဲ့ အမြိုးစုံ ကွိုးခုနျပွီးကို ဝငျပါနတေော့တာ။ ခုလညျးကွညျ့… နှုတျခမျးပျေါ တငျသုံးပွနျတော့လညျး ပနျးရောငျလေး သမျးစသေတဲ့လေ…
သကွားညို လ်ဘကျရညျဇှနျးတဈဇှနျးကို ပြားရညျတဈဇှနျးထညျ့ နှဈခုကို ရောမှလေိုကျပါ။ ပွီးတာနဲ့ နှုတျခမျးပျေါကို စကျဝိုငျးပုံစံတငျပွီး နှိပျနယျပေးလိုကျပါနျော။ ၅ မိနဈလောကျ ထားပွီးတာနဲ့ နှုတျခမျးကို အဝတျနဲ့သုတျပွီး ရနှေေးနှေးလေးနဲ့ ဖှဖှလေး ပွနျလိုကျဖိပေးပါ။ တဈပတျ နှဈခါလောကျ လုပျပေးရုံနဲ့ ဆဲလျအသတှေေ ကှာကပြွီး ကနျြးမာရှနျးစိုတဲ့ ပနျးနုရောငျနှုတျခမျးလေးကို ပိုငျဆိုငျစမှောပါ။
(၃) သလဲသီးအရညျနဲ့ နှုတျခမျးအဆီ
သလဲသီးစားရငျ လကျမှာ အနီရောငျတှေ စှဲပွီးကနျြခဲ့တယျမလား? အဲဒီစိတျအနှောကျအယှကျဖွဈစရာကို အခုအားသာခကျြအနနေဲ့သုံးမယျလေ။
သလဲသီးအစတှေ့ကေို ကွိတျခပြွေီး ရလာတဲ့အရညျတခြို့ကို ကိုယျသုံးနကြေ lip blam ထဲ ထညျ့ပွီး မှလေိုကျပါ။ အားလုံးနှံ့သှားပွီဆိုတာနဲ့ ခဏလောကျအခွောကျခံပွီး သုံးလို့ရပါပွီနျော။ ဒီဟာကိုလညျး ကိုယျ lip blam လိမျးသလိုပဲ ကွိုကျတဲ့အခြိနျမှာ ကွိုကျသလို လိမျးလို့ရပါတယျ။ သလဲသီးမှာ ပါဝငျတဲ့ punicalagins ဆိုတဲ့ဓာတျပစ်စညျးက ယောငျးတို့ နှုတျခမျးညိုနတောကို လြှော့ခပြေးပွီး သဘာဝဆနျဆနျ ပနျးရောငျသနျးလာစမှောပါ။
Related Article >>> ယုံကွညျမှုကို မွှငျ့တငျပေးနိုငျတဲ့ အနီရောငျနှုတျခမျးနီ2018/
(၄) နှငျးဆီပနျးပှငျ့ဖတျနဲ့ နှားနို့
ရှေးခတျေတုနျးက အမြိုးသမီးတှေ နှုတျခမျးနီနဲ့ ပါးနီကို နှငျးဆီပနျးကို အရညျဖြျော၊ အခဲ (သို့) အနှဈလုပျပွီး လိမျးခွယျခဲ့ကွတယျမလား။ ဒီမှာလညျး အဲဒီနညျးကိုပွနျသုံးပွီး နှုတျခမျးကို ပေါငျးတငျကွညျ့ရအောငျ…
နှငျးဆီပှငျ့ဖတျ ၅ ဖတျကို နှားနို့ဖနျခှကျရဲ့ တဈဝကျလောကျနဲ့ရောပွီး တဈညလောကျစိမျထားလိုကျပါ။ မနကျကရြငျတော့ အဲဒီနှငျးဆီပှငျ့ဖတျတှကေို ဆယျပွီး ကွညေကျသှားအောငျ ထောငျးပွီး နှားနို့ကို တဈစကျခငျြးစီထညျ့ပါ။ အနှဈလေးဖွဈလာပွီဆိုရငျတော့ နှုတျခမျးပျေါမှာ ၁၅ မိနဈလောကျသုတျလိမျးထားပွီး ရအေေးအေးလေးနဲ့ ပွနျဆေးခလြိုကျပါ။ တဈပတျကို ၂ ကွိမျကနေ ၃ ကွိမျလောကျအထိ လုပျပေးရုံနဲ့ အနီရောငျသနျးတဲ့ နှုတျခမျးလေးတဈစုံ ရနိုငျပါပွီလို့။
ကဲ ဒီပစ်စညျးတှကေတော့ လှယျလှယျနဲ့ ဘယျနရောမှာမဆို ရှာလို့ရတာမို့ လုပျရတာလညျး အရမျးအပနျးမကွီးပါဘူးနေျာ့။ အခုပဲလုပျပွီး ခကျြခငျြးတော့ မသိသာလာနိုငျဘူးလို့ ဆိုပမေဲ့ တဖွညျးဖွညျးခငျြးတော့ သိသိသာသာ ပွောငျးလဲလာမှာမို့ တဈခါနှဈခါလောကျ လုပျပွီး လကျမလြှော့လိုကျပါနဲ့လို့ မှာပါရစေ ယောငျးတို့ရေ… ကိုယျ့မကျြနှာကို နှဈရှညျလမြား ပစ်စညျးအကောငျးတှသေုံးပွီး ခဈြလာရသလို နှုတျခမျးကိုလညျး ခဈြပေးလိုကျပါ။ ကိုယျလိုခငျြတဲ့ ပနျးနုရောငျနှုတျခမျးလေးကို ရလာပါလိမျ့မယျ။
Tags: aloe, baby, Coconut, lip, lips, oil, olive, petals, pinkish, rose, Scrub, sugar, vera